शशांकलाई विरासतले थेग्ला? आफूमा सबल नेतृत्वको गुण विकास गर्दै पार्टी कार्यकर्ता तथा जनताको विश्वास जित्ने प्रयत्न गरेका छैनन्, शशांकले। बरु पारिवारिक विरासत र धर्मको त्यान्द्रो समाएर राजनीतिक बाढी तर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। बिहीबार, मंसिर १८, २०७७
ओलीको विरासतनजिक को? स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ओलीले अब लामो समयसम्म आफ्नो समूहको नेतृत्व गरिराख्न सम्भव छैन। त्यसैले उनको विरासत कसले थाम्ने विषयमा बेलाबख... शनिबार, कात्तिक १, २०७७
केन्द्रले देखायो, प्रदेशले सिक्यो : यी हुन् संसद नै रणभूमि बनेका ५ घटना सोमबारै बसेको पहिलो बैठक केही बेर बसेर दिउँसो २ बजेका लागि दोस्रो बैठक बोलाइएको थियो। निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सुरु भएको बैठकमा... सोमबार, असोज १९, २०७७
डा केसीका मागमाथि चिरफार-६ : 'भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर' भन्न पनि अनसन बस्नुपर्ने! डा केसीले आफ्ना विगतका अनसनहरुमा पनि मुख्यगरी चिकित्सा क्षेत्रका मागहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए। त्यसका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भि... आइतबार, असोज ११, २०७७
प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्पविहीन पात्र हुन् डा युवराज खतिवडा? शक्तिशाली सरकार भए पनि उनले कुनै ठूलो आयोजनालाई सरकारको 'सिग्नेचर प्रोजेक्ट'का रूपमा अघि बढाउन सकेनन्। राजस्वतर्फ पनि 'एम्बिसिएस' लक... आइतबार, भदौ १४, २०७७
माधव नेपाल पक्षको सधैंको गुनासो- एक व्यक्ति, एक पद एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गराउन सकिएमा ओलीलाई संगठनात्मक रुपमा कमजोर बनाउन सकिने नेपाल पक्षधरको बुझाइ छ। शनिबार, भदौ १३, २०७७
ईश्वर पोखरेलका सम्धीलाई वाणिज्य बैंक सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा प्रा डा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोमब... मंगलबार, भदौ ९, २०७७
नेकपा प्रतिवेदनको सार: ओली सेरेमोनियल अध्यक्ष? महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ओलीका निम्ति अहिलेसम्मको एकलौटीमा ब्रेक लाग्न सक्छ। किनकि, त... सोमबार, भदौ ८, २०७७
एउटै बाटोबाट आएका दुई कार : सर्वोच्चले टेस्ला छाड्यो, अउडी अड्कायो अवैध आयात भएका टेस्लाका दुई इलेक्ट्रिक कार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटे। आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले गाडी छुटाउन माग गर्दै ज... बिहीबार, साउन २९, २०७७